Maitiro Ekuvandudza e-Commerce Kasitoma Chiitiko | Martech Zone
Vatengi ndiyo hwaro hwe chero bhizinesi. Izvi ichokwadi kumabhizinesi ezvese akamira, madomeni uye nzira. Vatengi vakakosha pamatanho ese emabhizinesi ako maitiro. Zvinangwa zvebhizinesi, marongero, uye mushambadziro wekushambadzira wemakambani anotungamira akarukwa zvakakomberedza zvido nezvinodiwa nevatengi vavo uye nevateereri.
Vatengi uye eCommerce Nharaunda
Mune zera rinotungamirwa nedigitalization, nharembozha, uye makwikwi anotyisa, haugone kukoshesa kukosha kwevatengi. Vanopfuura vashanu vevanokwikwidza vari kupa zvigadzirwa nemasevhisi akafanana neako kune mumwe mutengi chero nguva yakapihwa. Chigadzirwa chaunopa chinofanira kunge chakasarudzika uye mukufarira kwevashandisi vako, kuti usarasikirwa nemukana wekutengesa.
Iko kiyi yekutyaira chinhu apa chiitiko chevatengi vako nechako chigadzirwa uye vatengi basa. Izvo zvirinani chiitiko, mikana yakawanda iwe yekutengesa.
70% yezviitiko zvekutenga zvinoenderana nekuti vatengi vanonzwa sei kuti vari kurapwa.
Neosperience, Kuteedzera kweVatengi: 10 Matamba uye Chokwadi Kuti Uvandudze Sarudzo Yako
Vemabhizimusi ekuona vane chivimbo chakasimba chekuti nekupa ruzivo rwevatengi zvirinani, ivo vanokwanisa kukunda makwikwi avo uye nekuisa kuvimba nevatengi uye; pakupedzisira, tora vatengi vazhinji neshoko remuromo.
Philosophically, eCommerce ndeye nyore kune vatengi. Vanosarudza kushambadzira pamhepo nekuti zviri nyore, zvinodhura, uye zvizere nesarudzo. Zvakaitika mumunda wedziviriro yedata zvinobvumidza nzira dzakachengeteka, dzakachengeteka dzekubhadhara, nepo ichivharira mikana yekubiridzira kwepamhepo kunosanganisirwa nekutenga pamhepo. Izvi zvakakonzera kuwedzera kwemakomo mukutengesa kweCommerce nemari.
eCommerce sales inogona kurova iyo $ 4.3 trillion mucherechedzo pakupera kwa2021.
Shopify, Iyo Global Ecommerce Playbook
Kuti usvike ipapo, eCommerce inofanirwa kusunga bhandi ravo uye kutanga rwendo rwekuvandudza - kupa a yepamusoro yevatengi ruzivo. Chiitiko chako chevatengi chinofanira kuwedzera huwandu hwese hwekugutsikana kwevatengi kuitira kuti uwedzere pakukura kwemari yako.
80% yevashandisi havangatengese nekambani nekuda kwehurombo hwevatengi ruzivo.
Hubhuki, Ichokwadi Chakaoma Nezve Kuwana Mari (uye Nevatengi Vako Kuti Vangakununura)
Ichi chinyorwa chinozivisa mamwe akanakisa maitiro ayo anobatsira kuvandudza ruzivo rwevatengi vako nebhizinesi rako reCommerce.
Gadzira YeMushandisi Yehukama Chiitiko
Kubva pawebhusaiti / peji peji peji kune zvigadzirwa zvigadzirwa uye kubva kungoro yekutarisa peji, iro ruzivo rwevashandisi pane yako webhusaiti rinofanira kunge risina mhosva. Vatengi vako vanofanirwa kukwanisa kuita chero chavanoda kuita.
Kunyangwe ivo vari kuyedza kudurura ngoro yavo, maitiro uye kufamba kunofanirwa kuve kwakagadzirwa zvakajeka uye kunotsanangurwa saka havawone kuchikanganisa kushandisa webhusaiti yako. Iwe unofanirwa kugadzira yako webhusaiti kana app kubva kumutengi-ane hushamwari maonero. Inofanirwa kuve nyore kune vashandisi vewebhu, kwete iwe chete.
Panofanirwa kuve nebhatani rekutsvaga kubatsira vatengi kuwana chigadzirwa chavari kutsvaga. Zvikamu, zvinyorwa zvemapeji, zvigadzirwa mazwi echigadzirwa, ma tag, zvigadzirwa zvemifananidzo, uye zvimwe zvinhu - zvese zvinofanirwa kuiswa mukati kuti zvive nyore zvevashandisi. Fungisisa nezvekuendesa eCommerce yekutsvaga yekuwedzera kugonesa kutsva uye nyore kutsvaga ficha pawebhusaiti yako.
Ipa Nzira Dzakachengeteka dzekubhadhara
Maitiro ekubhadhara pane yako eCommerce chitoro anofanirwa kuve akachengeteka, akachengeteka, uye asinganetse. Ndichiri kutenga online, vatengi vanoda kuziva yavo yemunhu uye yemari data yakachengeteka.
Wedzera yakawanda senzira dzekubhadhara pachitoro chako sezvinobvira. Kiredhiti / Kiredhiti Kadhi Kubhadhara, Bhengi Kutamisirwa, Cash pane Dhirivhari (COD), PayPal, uye e-Wallets inzira dzakakurumbira nzira dzekubhadhara mazuva ano. Iwe unozofanirwa kuve nechokwadi chekuti yako portal inobvumidza vatengi vako kubhadhara kuburikidza neipi yeiyi sarudzo dzekubhadhara.
Kunyanya kukosha, iwe unozofanirwa kuvimbisa yako peji vashanyi nevatengi kuti zvese zvaunobhadharisa sarudzo zvakachengeteka uye zvakachengeteka. Chengetedza mari kuti uwane zvitupa zvakati wandei zveizvi woisa mabheji pawebsite yako / app sezviratidzo zvekuvimba kuvimbisa vatengi vako kuti data ravo rakachengeteka nemi.
Chengetedza mari yekubhadhara pasuwo inouya nematanho ekuchengetedza matanho. Encryption yedhata yakapihwa nemutengi ichaita shuwa kuti yavo yekutengeserana yakachengeteka. Kushandisa suo rekubhadhara kunosimbisa yako mutengi uye bhizinesi dhata, uye kunoderedza kusimba uye kuwanda kwekutyisidzira kwekubiridzira kwepamhepo.
Gadzira Seamless Checkout Maitiro
Kazhinji yenguva, chikonzero chiri kumashure kwe yakasiyiwa ngoro ndeye yakaoma Checkout maitiro. Maitiro ekubuda pawebhu yako kana app anofanirwa kunge ari mapfupi, akapusa uye anokurumidza. Zvakare, mushandisi anofanira kukwanisa kuona yake / yake yekutengera ngoro pane yega peji saka iye / iye anoziva nzira yekuzadzisa odha.
Iyo ecommerce indasitiri inorasikirwa zvisingaverengeki madhora gore rega nekuda kwekasiiwa ngoro kana kukanzurwa kubhadhara panguva yekutarisa. Iwe unogona kuendesa otomatiki kuyera mafambiro ari kumashure akaraswa ezvitoro zvingoro kuti uvandudze zvikanganiso zviripo mune yako Checkout maitiro.
Panguva yekutenga, mutengi anofanira kukwanisa kuona kukosha kwengoro yake uye mari dzekutumira dzinoshanda. Iyo peji inofanirwa zvakare kuratidza ruzivo nezve zvinopihwa uye kudzikisira makuponi anoshandiswa kune mushandisi.
Vatengi vanogara vaine hanya nezve kuendesa kwavo odha. Ivo vanosheedza mukati kuti vatarise mamiriro ekutakura kwavo.
Shandisa yakakwira yekutakura suite inobatsira yako eCommerce bhizinesi kubatana nevatakuri vazhinji uye inokutendera iwe kuti ugadzire inochinja mitemo yekutakura - sekusiyana kwakasiyana maodha, nzvimbo dzevatengi, uye zvimwe zvakawanda zvakakosha zvinhu - kuburikidza nedhodhi rimwe chete.
Kana bhizinesi rako richiendesa kana masosi kubva kunze kwenyika, saka icho chinofanirwa kune yako yekutumira suite kuve neinotumira / kutumira kunze kutumira kweanoshanda. Izvo zvese zvinobatsira iwe kugadzira chiitiko chiri nani kune vashandisi vako kana zvasvika pakutakura uye kurongeka kuendesa.
Chekupedzisira, eCommerce chitoro chinofanirwa kuona zero yekuzorora uye pasina kudzikira panguva yekutarisa kuti udzivise zviitiko zvekusiiwa kwemota yekupedzisira.
Nunura Yakakwirira Mutengi Sevhisi
Kuvandudza ruzivo rwevatengi, iwe unofanirwa kutarisa mukupa yakakwira nhanho yebasa revatengi. Izvi zvinofanirwa kusanganisira pre-kutengesa uye post-kutengesa sevhisi.
Gadzira timu yevanhu vanodiwa kuti vawane yako tafura yekutsigira vatengi. Vape simba nemhando yepamusoro yeAI-inogoneswa CRM maturusi - inofanirwa kunge iine suite yemabhizimusi emazuva ano eCommerce - kuti vakwanise kubata zvakanaka mibvunzo yevatengi nenyaya.
Fungidzira zuva rakabatikana uye mutsara wakareba wevatengi vakamirira nguva yavo yekutaura kune wako mutengi anotsigira mumiriri!
Kuve neAI-inogoneswa chatbot munzvimbo inochengetedza vamiririri vako nguva, pamusoro pe, kuvabvumidza kuti vatarise kune mamwe mabasa epamoyo eako maitiro ekutsigira vatengi. MaChatbots anogona panguva imwechete kubata akawanda mafoni / kutaurirana uye nekukurumidza kugadzirisa zvakajairika nyaya dzakadai sekusimbisa odhiyo, kudzima, kutsiva, kudzorera, zvinyorwa zvekutakura, nezvimwe.
Kuwedzeredza Kutsvaga & Yemagariro Media Optimization / Kushambadzira
Nenzira chaiyo yekutsvaga injini nekushambadzira, unogona kubatsira vateereri vako kutsvaga zvavanotsvaga pane injini dzekutsvaga, seGoogle neBing. Kana yako eCommerce backend isiri SEO-yakagadzirira, unogona kushandisa mhando yakanaka eCommerce SEO yekuwedzera uye kushandisa nzira dzakaedzwa-uye-dzechokwadi dzeSEO kuti dzioneke mumhedzisiro yekutsvaga pane anotungamira enjini dzekutsvaga.
Yako eCommerce bhizinesi inogona kushandisa vezvenhau nzira dzakawanda:
To kukurudzira zvigadzirwa zvako, masevhisi, tsika yekambani, uye zvinopihwa;
To batanidza nevateereri vako nevatengi;
To teerera kune vako vasina kugutsikana vatengi uye kugadzirisa kwavo nyaya pane yeruzhinji maseru; uye
To shambadza mhando yako (s).
Iwe unozongoda kushandisa anonyanya kushanda masocial network kune rako bhizinesi, tsvaga uye ubatanidzane nevateereri vako / vatengi. Nekureruka kwevatengi vako, iwe unogona kuwedzera ongororo peji, gonesa kupindura uye kumadziro kutumira kune vatengi, uye gadzira shopu uye tengesa pasocial network.
Kunze kwekupa zvirinyore, nharaunda yakachengetedzeka uye kujekesa, unogona kupa zvinongedzo zvakagadzirirwa kune vashanyi vako nevatengi varipo kuti vawedzere ruzivo. Kune izvi, iwe unozofanirwa kushanda neAI neML maturusi ayo anogona kudzidza kubva pane hunhu hwevashandisi paInternet uye kukubatsira iwe kurumbidza chakakodzera chigadzirwa kumutengi akakodzera. Zvakafanana nekupa / kukurudzira chimwe chinhu chingangodaro chiri kutsvakwa nemushandisi.